ठेकेदारलाई तीन अर्ब दिन नमानेपछि मलाई सरुवा गरियो : गजेन्द्र ठाकुर « Nijamati Khabar
ठेकेदारलाई तीन अर्ब दिन नमानेपछि मलाई सरुवा गरियो : गजेन्द्र ठाकुर
काठमाडौं- इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको ठेक्का रद्द भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना थप अन्योलमा धकेलिएको छ। यहीबीचमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरसँग मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरको विवादका कुरा पनि आए। मेलम्चीको सुरूङ खन्न ठेक्का पाएको सिएमसीसँग ठाकुरले कमिसन मागेको विषय बाहिरिएसँगै उनी विवादमा तानिए।
यही सन्दर्भमा ठाकुरसँगको कुराकानी ।
एक्कासि सरुवा भयो। किन?
मलाई पनि केही थाहा थिएन। आजै बिहान एउटा टिभीमा मेलम्चीको पानी कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। त्यहाँ दुई वटा बाटो मैले देखाएको थिएँ। छोटो बाटो र लामो बाटोको कुरा गरेको थिएँ। छोटो बाटो गइयो भने क्याबिनेटले निर्णय गरेको सय दिनमा मेलम्चीको पानी ल्याउँछु भनेको थिएँ। लामो बाटो गइयो भने दुई वर्ष लाग्छ भनेको थिएँ।
छोटो बाटो भनेको कस्तो हो?
यसका लागि क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ। नेपाली ठेकेदारहरुबाटै काम गराउनुपर्छ। तर करिबकरिब ठेकेदार भागेपछि एक महिनादेखि हामीलाई माननीय मन्त्रीज्यु र राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो टिमको दबाब के थियो भने दुइटै बाटो नगईकन भागेकै ठेकेदारलाई ल्याउने। र, उसले जे सर्त दिन्छ, सोही अनुसार पैसा तिरेर बोलाउने। उसको सर्त त हाम्रो कानुनअनुसार मान्य हुने खालको छैन। २ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ उसले पैसा मागेको, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कुराचाहिँ त्यति दिऊँ भन्ने थियो। हाम्रो कुरा के भने, त्यो कुरा लेखेर दिनुस्। तर, लेखेर नदिने। त्यसले गर्दाखेरि… । मलाई त आशा थियो, पानी ल्याएर जाऊँला। तर कर्मचारीले आफ्नै अनुसार गर्न पाउँछ भन्ने छैन। सरकारले मलाई कता जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसअनुसार म जान्छु।
मन्त्रीसँग केही असझदारी थियो?
असझदारी त के भने, उहाँले कानुन विपरीतको काम गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले मानेको थिइनँ।
उहाँले के भन्नुभएको थियो?
२ अर्ब ५९ करोड ९९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ भागेको ठेकेदारलाई दिएर भए पनि उसैलाई काममा लगाउनु भन्ने उहाँको कुरा थियो। त्यो कानुन अनुसार मिल्दैन भनेर मानिरहेको थिइनँ।
त्यही कुरा नमान्दा सरुवा गरियो भन्ने तपाईंको कुरा हो?
त्यो तपाईंले मूल्यांकन गर्नुस् तर साँचो कुरा यही हो। जहाँसम्म ठेकेदारको कुरा थियो, म आउनुभन्दा अघिदेखि नै मुद्दा हाल्ने र विभिन्न कुरा गरेर २ अर्ब ५० करोडको मुद्दा हालेर भेरिएसन दाबीबापत पैसा लिने गरेको थियो। मेरो पोस्टिङ भएको बेलामा पनि मुद्दा थियो, एक अर्ब ६५ करोडको। त्यो त्यसैबेलादेखि रिसाएको हुन सक्छ। त्यो रकममा हामीले आफ्नो डकुमेन्ट राख्दाखेरि ३६ करोडमा निर्णय भयो।
त्यसपछि हामीले असन्तुष्टिको पत्र दर्ता गराएको थियौं। तर पनि ठिकै छ, काम गर्न त्यसलाई पैसा हुन्छ भनेर हामीले पैसा दिन खोजेका थियौं। त्यतिबेला मन्त्रीले नै पैसा नदिन भन्नुभयो। त्यतिबेलाको कुरा त्यस्तो थियो। अहिले फेरि के कस्तो भयो बुझ्न सकिएन।
अचानक सरुवा हुँदा कस्तो लागिरहेको छ?
सरुवा भएर केही चित्त दुखाइ छैन। किनभने, म २७औं सचिव थिएँ। मन्त्री भने २४औं हुनुहुन्छ। १८औं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। धोको थियो- तीन-चार महिनामा काम सकौंला। तर सरकारको कुरा अर्कै रहेछ। जे होस्, हामी सरुवा भएका छौं।
बीचमा कमिसनको कुरा जोडेर तपाईंलाई नै प्रचार गरिएको थियो होइन?
जे कुरा आउँछ, सबै सत्य हुँदैन। तपाईंहरुले मूल्यांकन गर्नुस्, कमिसनको कुरा कसलाई के भन्यो, कसले के भयो, तर हामी त कर्मचारी हौं, सबै कुरा बोल्न मिल्दैन। तर कुरा के हो भन्ने त अहिले म आफैं बोल्दैछु नि। ठेकेदारलाई ३६ करोड रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्दा मन्त्रीज्युले नै रोकेको हो नि। अब मैले त्यो कुरा नभनीकन जाँदाखेरि नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रो विरुद्धमा कमिसनका जेजस्ता कुरा आए, सबै असत्य छ भन्ने कुरा आजको मितिदेखि बुझ्नुस्। ब्युरोक्रेसी कस्तो दबाबमा काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस्।
३ अर्ब दिने कुरा हामीले सही गरेपछि हुन्थ्यो। तर, हुन दिएनौं। बरु हामी सरुवा हुन तयार भयौं। हिजै पनि मैले भनेको थिएँ– मन्त्रीज्यु, मलाई सार्न तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर जब सचिव आउँछ, कानुनविपरीत ठेकेदारलाई ३ अर्ब दिएर काम गराउँछ, तपाईंलाई शुभकामना छ। तर म यहाँ भएसम्म यो काम हुँदैन।
त्यसो भए, त्यही ३ अर्बको भुक्तानीको खेल नै हो यो?
हुन सक्छ। तपाईंहरु चौथो अंग हुनुहुन्छ, तपाईंले नै कुरा गर्नुस्। तर म जबसम्म रहेँ, त्यो कानुन विपरीतको भुक्तानी हुन दिइनँ। म हिँडेपछि जो आउनुहुन्छ, उहाँलाई शुभकामना छ, उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ।
के अब मेलम्ची थप अन्योलमै जाने देख्नुभएको छ?
त्यो म भन्न सक्दिनँ। मेरो आफ्नै खालको प्लान थियो, अब जो साथी आउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नै खालको प्लानमा काम गर्नुहुन्छ। सोच्ने फरकफरक तरिका हुन्छ। त्यसैले उहाँले कसरी सोच्नुहुन्छ भनेर म त भन्न सक्दिनँ। तर म जानेबित्तिकै मेलम्ची अन्योलमै जान्छ भनेर भन्दिनँ। जनताले छिटोभन्दा छिटो खानेपानी पाओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ।
म दुईचोटि आएँ। पुसमा आउँदा टनेल नै छिचोलिएको थिएन। त्यतिबेला काम बन्द थियो तर हामीले टनेल छिचोल्यौं। तर म सरुवा भएपछि बैसाखमा काम बन्द भयो। हुँदो के रहेछ भने काम बन्द गरेपछि ५०/६०/१०० करोड ठेकेदारले पैसा लिने। यसका लागि एउटा ग्रुप नै रहेछ। म असारमा आएँ। अहिले पनि दुई महिनायता काम बन्द छ।
हामी नेपाली लगाएर काम गर्न खोज्दै थियौं। तर त्यो ग्रुप यति बलियो छ कि त्यसैलाई ल्याउन खोज्दैछ, ३ अर्ब दिएर। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने मेलम्चीको पानी आओस् भन्ने पक्ष निकै कमजोर छ। नआओस् भन्ने पक्ष बलियो छ। यति बलियो छ कि उसले आफ्नो अनुसार सचिव, मन्त्री र कार्यकारी प्रमुख फेर्न सक्छ। त्यो कुरा मिडियाले बुझ्नुस्।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको अदालतकाे फैसला कार्यान्वयन गर्दिनँ : पद्मा अर्याल
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पद्मा अर्यालले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत
नसुध्रिने मन्त्रीको टिकट काटिन्छ
नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराई सधैं केपी ओलीका स्थायी प्रतिपक्षजस्ता प्रतीत हुन्थे । योसाता स्थायी
कानुन निर्माणको हिसाबले स्वर्णयुग पूरा भयोः भानुभक्त ढकाल
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको चुनावी गठबन्धनले करीव दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेपछि गत वर्ष